Jihad (အင်္ဂလိပ်: /dʒɪˈhɑːd/; အာရပ်: جهاد‎ jihād [dʒɪˈhaːd]) ဆိုသည်မှာ အာရေဗျ ဝေါဟာရတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ခက်ခဲစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အားထုတ်ခြင်း ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဤဝေါဟာရသည် အများအားဖြင့် စစ်ပွဲများနှင့် ဆက်စပ်နေသော်လည်း အစ္စလာမ်စကားရပ်အရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့် လူမှုရေးဘဝတို့တွင် ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုများနှင့် အညီ ပြုမူခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ မယုံကြည်သူများအပေါ်တွင် လက်နက်ဖြင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဟု အစ္စလာမ်ဥပဒေတွင် ဤဝေါဟာရကို ရည်ညွှန်းသည်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သုံးစွဲလာမှုကြောင့် ဤဝေါဟာရကို မကြာသေးသော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ပိုမိုအာရုံပြုမိလာခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ John L. Esposito, ed. (2014)။ "Jihad"။ The Oxford Dictionary of Islam။ Oxford: Oxford University Press။3စက်တင်ဘာ 2014 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 29 ဩဂုတ် 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Peters၊ Rudolph; Cook၊ David (2014)။ "Jihād"။ The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics။ Oxford: Oxford University Press။ doi:10.1093/acref:oiso/9780199739356.001.0001။ ISBN 9780199739356။ 23 ဇန်နဝါရီ 2017 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 24 ဇန်နဝါရီ 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Tyan, E. (2012)။ "D̲j̲ihād"။ in P. Bearman; Th. Bianquis; C.E. Bosworth; E. van Donzel; W.P. Heinrichs (eds.)။ Encyclopaedia of Islam (2nd ed.)။ Brill။ doi:10.1163/1573-3912_islam_COM_0189။
↑ Jackson၊ Roy (2014-02-05)။ What is Islamic Philosophy?။ Routledge။ p. 173။ doi:10.4324/9781315817552။ ISBN 978-1-315-81755-2။
↑ Roy Jackson (2014)။ What is Islamic philosophy?။ Routledge။ p. 173။ ISBN 978-1317814047။ jihad Literally 'struggle' which has many meanings, though most frequently associated with war.
↑ Gerhard Böwering, Patricia Crone, ed. (2013)။ "Jihad"။ The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought။ Princeton University Press။ Literally meaning "struggle,", jihad may be associated with almost any activity by which Muslims attempt to bring personal and social life intoapattern of conformity with the guidance of God.
↑ Wael B. Hallaq (2009)။ Sharī'a: Theory, Practice, Transformations။ Cambridge University Press (Kindle edition)။ pp. 334–38။
↑ Peters၊ Rudolph (2015)။ Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History။ De Gruyter Mouton။ p. 124။ doi:10.1515/9783110824858။ ISBN 9783110824858။ 25 အောက်တိုဘာ 2016 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 24 ဇန်နဝါရီ 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး – via De Gruyter။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျီဟက်&oldid=648033" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။